April 10, 2021 - ApannPyay Media
အလှူဒါနပြုပြီးတိုင်းမှာ ဘာကြောင့်ရေစက်ချရသလဲ ?
April 10, 2021 by ApannPyay Media
အလှူဒါနပြုပြီးတိုင်းမှာ ဘာကြောင့်ရေစက်ချရသလဲ ? ကုသိုလ် ကောင်းမှုတွေ ပြုပြီးတိုင်း အထူးသဖြင့် အလှူ ဒါန ပြုပြီးတိုင်းမှာ ရေစက်ချ အမျှဝေ လေ့ရှိတာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုပါ ။ . ။ မိမိတို့ရဲ့ ကုသိုလ် ကောင်းမှု များကို ဝသုန္ဒြေ မြေစောင့်နတ်ကို သက်သေ ပြုရတဲ့ အနေနဲ့ ရေစက်ချတယ်ဆိုတာတော့ အများ သိပြီး ဖြစ်ပါတယ် ။ . ။ ဆရာတော် ဘုရားကြီး ရေစက်ချ ဖွင့်ဆိုပုံ ကတော့ ကိလေသာ အပူမီးတွေ ကြားက ရုန်းထွက် နိုင်အောင် ၊လောကဓံကို တရား ရှိရှိ နဲ့ ရင်ဆိုင် နိုင်အောင် ၊ မိမိတို့ စိတ်ကလေး ကြည်နေ … Read more
ငယ်စဉ်က မိခင်မေတ္တာ ငတ်ခဲ့သူတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ စိတ်ဒါဏ်ရာတွေ
ငယ်စဉ်က မိခင်မေတ္တာ ငတ်ခဲ့သူတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ စိတ်ဒါဏ်ရာတွေ ငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးဘဝမှာ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ ထိန်းကွပ်မှုကောင်းကောင်းရဖိုု့အရေးကြီးပါတယ် ။ သမီးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံမှာ မိခင်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေအများကြီးပါပါတယ် ။ ကလေးဘဝမှာတည်းက မိခင်ရဲ့ ချစ်ခင် ဂရုစိုက်မှုတွေ ကို မရခဲ့တဲ့ သမီးမိန်းကလေးတွေကတော့ ကြီးလာတဲ့အခါ ဒီလိုစိတ်ဒါဏ်ရာတွေ ရရှိကြပါတယ် (၁) ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံတော့ဘူး ငယ်စဉ်တည်းက အမြဲလိုလိုဆူပူအော်ငေါက်နေတတ်တဲ့ အမေနဲ့ နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေက ကြီးလာတဲ့အခါ ဘယ်သူ့ကိုမှ မယုံကြည်တတ်တော့ပါဘူး ။ သူတို့ကိုမှီခိုအားထားရတဲ့ မိခင်ရဲ့ သစ္စာဖောက်မှု ၊ အနိုင်ကျင့်မှုတွေကို ခံစားခဲ့ရတာကြော့် တစ်ခြားလူတွေကိုလည်း မယုံရဲတော့တာပါ ။ (၂) အကြောက်လွန် ၊အတွေးလွန်တတ်တယ် ဘယ်ကိစ္စမျိုးမဆို အဆိုးဆုံးတွေကို အရင်တွေးတတ်ပြီး ငါလုပ်ရင်ရော ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယစိတ်တွေနဲ့ အမြဲလိုလို … Read more
သင့်ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရအောင် နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ ဘာတွေထူးခြားလဲ
သင့်ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့်လိုက်ရအောင် နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ ဘာတွေထူးခြားလဲ ခုပဲ သင့် ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့် လိုက်ရအောင်.. နံပါတ် ဘယ်လောက်လဲ.. ခုပဲ ညာလက်ဖဝါးနဲ့ အဖြေရှာ ရအောင် ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖဝါးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်နော် (၀၁). ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသောသူ၊ ခေါင်းမာသောသူ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လေးစား အားကိုးခံရမည့်သူပါ။ မမှားကိုနည်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက အမြဲတမ်းမှန်ကန်နေမှာပါ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းခေါင်းမာသူဖြစ်ပြီး အများအတွက်ထက် ကိုယ့်အတွက်ကို ကြည့်ပြီး အလုပ်လုပ်တတ်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အတွက်ထက် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုလည်း စဉ်းစားတတ်ပါစေ…။ (၀၂). ရိုးသားပြီး ယုံကြည်ရသောသူ၊ လူစိမ်းကို ယုံလွယ် သောသူ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိပြီး လူတွေအပေါ် ရိုးရိုးသားသား ဆက်ဆံနိုင်သော သူဖြစ်ပါတယ်။ … Read more
မင်းကို အရမ်းချစ်ဖို့ (3)မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီးဖတ်လိုက်ပါ
မင်းကို အရမ်းချစ်ဖို့ (3)မိနစ်လောက် အချိန်ပေးပြီးဖတ်လိုက်ပါ သူက မင်းကို တစ်အားလည်းရစ်တယ် ။ စိတ်ကောက်ရင်လည်း ခဏ ခဏ ပဲ ။သဝန်တိုတာလည်း အကြိမ်ကြိမ် ။ ဘယ်မှာလဲ ? ဘာလုပ်နေလဲ ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ နဲ့ မင်း ကို မေးနေ ၊ ပြောနေတာ ကို မင်း က သံသယ မျက်လုံးတွေ နဲ့ အကြည့်ခံနေရတယ် ဆိုပြီး မကြိုက်ဘူး။ အဲ့လို များ ထင်ရင် အကြီးကြီးလွဲပြီပေါ့ ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ လူတွေက သိပ်ကို ချစ်မိသွားရင် အချစ်ကြီးလာတတ်ကြတယ် ။ အချစ်ကြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ မင်းအပေါ်ထားတဲ့ စိတ်က ပေါ့ပေါ့တန်တန် မဟုတ်တော့ဘူး။လေးလေး … Read more
ရှမ်းပြည်နယ်လေးရဲ့ ချစ်စရာ့ဓလေ့ရိုးရာလေးဆိုတဲ့ အိမ်ရှေ့ အိမ်ရှေ့က ထမင်းထုပ်လေး
ရှမ်းပြည်နယ်လေးရဲ့ ချစ်စရာ့ဓလေ့ရိုးရာလေးဆိုတဲ့ အိမ်ရှေ့ အိမ်ရှေ့က ထမင်းထုပ်လေး ယနေ့ ထမင်းက ၂ ထုပ် ဟင်းက ၄ ထုပ် အိမ်ရှေ့ တရုတ်စကားဝါပင်လေးမှာ မရှိဆင်းရဲတဲ့သူ ဗိုက်ဆာတဲ့သူများ အလွယ်တကူနဲ့ ယူစားလို့ရအောင်ချိတ်ထားဖြစ်တယ်ဗျ ရှမ်းပြည်နယ်လေးရဲ့ချစ်စရာ့ဓလေ့ရိုးရာလေးဆိုလည်းမမှားဘူးပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်က သူတို့လာယူစားတာလေးကိုမြင်ချင်တယ် ပြီးတော့ ပိုပြီး ဝမ်းမြှောက်ပီတိလေးဖြစ်ချင်လို့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တာ ချိတ်ထားပြီးသိပ်မကြာခင်လေးမှာပဲ လူတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ထမင်းထုပ် ဟင်းထုပ်တွေလာယူတယ်ဗျ အဲ့မှာ ကျွန်တော်က ထမင်းထုပ်လာယူတဲ့အစ်ကိုကြီးကို လှမ်းပြောလိုက်တယ် အကုန်ယူသွားပါလို့ ပြောလည်းပြောလိုက်ရော သူကကျွန်တော့်ကိုဘာပြန်ပြောတယ်ထင်လဲ ရပါတယ်ဗျာ အစ်ကိုတစ်ယာက်စာလေးပဲယူသွားပါ့မယ်တဲ့ အကုန်လုံးယူမသွားချင်ပါဘူးတဲ့ အနောက်မှာ သူ့လိုပဲ ဗိုက်ဆာတဲ့သူတွေ လာယူစားလို့ရအောင်လို့တဲ့ သူစားဖို့ ထမင်းတစ်ထုပ်နဲ့ဟင်းတစ်ထုပ်လေးပဲယူသွားလေရဲ့ဗျာ ကောင်းလိုက်စိတ်ဓာတ်လေး မွန်မြတ်လိုက်တဲ့စိတ်ထား ကောင်းလိုက်တဲ့ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ကြားရတာပီတိဖြစ်လိုက်တာဆိုတာပြောမနေပါနဲ့တော့ အဲ့မှာကျွန်တော့်အတွေးထဲရောက်လာတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက လူကြီးတော်တော်များများပေါ့လေ သူ့လိုကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးရှိကြရင်သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ ရှမ်းပြည်မှာအိမ်တိုင်းနည်းပါးပဲ ဒီအတိုင်းလေးတွေချည်းပဲ ကိုယ်စားလို့မကုန်နိုင်မှန်းသိရင် … Read more
BUBBLE TEA အတုများ ကြောင့် အသက်အန္တရာယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသူလေး
BUBBLE TEA အတုများ ကြောင့် အသက်အန္တရာယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသူလေး အအေး ဆိုင်တွေမှာ မစ်ရှိတ်တွေ သောက်တဲ့အခါ သာကူစိအကြီးစားကြီးလို အိကျိအိကျိ နဲ့ အလုံးလေးတွေကို တွေ့မြင်ဖူးကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် Bubble Tea လိုအအေးတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ သူက စားလို့လည်းကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့် လူငယ်တွေတော်တော်များများထဲက မိန်းကလေးတွေက တော့ နှစ်သက်ကြပါတယ်။အဲ့ ဒီ Bubble အလုံးလေးတွေကိုတော့ ပီလောပီနံ နဲ့ ပြောင်းမှုန့် ရောကြိုပြီးတော့ သကြားနဲ့ သမအောင် လုံးထားတဲ့ အလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အလုံး ၁ လုံးတိုင်းမှာ ၁၄ ကယ်လိုရီ ပါဝင်ပါတယ်။ အချိုရည်တစ်ဗူးဆိုရင် အလုံး ၁၀၀ နီးပါးပါတာမို့ ၁၄၀ ကယ်လိုရီ ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့ ဒီ အလုံးလေးတွေကို အရမ်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက … Read more
လက်သူကြွယ်နှင့် လက်ညိုးအရွယ်အစားက ပြောပြနေသော သင့်အကြောင်း လက်ဖဝါးပေါ်က လက်ချောင်းလေးတွေရဲ့အတိုအရှည်ကနေ လူတွေရဲ့စိတ်တစ်ချို့ကို ပြောပြနေတယ်ဆိုတာ သင်တို့သိပါသလား၊ အများကြီးတော့ကွက်တိမှန်နိုင်မယ်မထင်ပင်မဲ့အနည်းငယ်တော့ တူလိမ့်မယ်လို့ယုံပါတယ်… ဘယ်လို လက်အတိုအရှည်ပုံစံတွေက ဘယ်လို စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ရအောင် လက်သူကြွယ် က လက်ညိုးထက်ပိုရှည်တဲ့ လက်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့သူတွေဟာ ချောတာထက်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလူချစ်လူခင်ပေါသူတွေပါ။ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာသူတစ်ပါးတွေရဲ့စိတ်ကိုအကဲခက်တတ်တာကြောင့် လူချစ်များတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်မြန်ပြီး စိတ်ဆတ်တတ်တဲ့အကျင့်လေးရှိတာကြောင့် လူအများအမြင်မှာဒေါသကြီးတယ်လို့တော့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့မဟုတ်မခံစိတ်မျိုးလေးပါ။ ရည်မှန်းချက်တွေခိုင်မာပြီး အမြင့်ဆုံးဆိုတာတွေကိုမှန်းထားလေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ကိုအကြာကြီးမညစ်တတ်ပဲ တစ်လမ်းမရရင် နောက်တစ်လမ်းဖောက်ဖို့တွေးနေတတ်ကြသူတွေပါ။ လက်ညိုးကလက်သူကြွယ်ထက်ပိုရှည်တဲ့သူတွေဟာ ခေါင်းဆောင်မှုအားကောင်းပြီးသူတစ်ပါးအပေါ်ကူညီဖေးမဖို့ဝါသနာပါသူတွေပါ။ ဦးဆောင်မှုအားပြင်းထန်လွန်းပြီး သူတစ်ပါးအပေါ်တင်းကြပ်ရင်းကနေ ဆရာလုပ်တယ်လို့အထင်ခံရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကြား ကိုယ့် ကိုယ်ကိုယ်သိက္ခာကျစေမဲ့အပြုမူမျိုးကိုလုပ်လေ့မရှိတတ်ကြဘူး။ တစ်စုံတစ်ခုကိုပြုမူလုပ်ဆောင်မယ်လို့ရည်ရွှယ်လိုက်ရင်မလုပ်ခင်မပြောခင်ကတည်းက ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးလို့ဖြစ်လာမဲ့အကျိုးရလာဒ်ကို ထည့်တွက်တတ်ကြတယ်။ ကောက်ခါငင်ကာထလုပ်တာမျိုးထက်စိတ်ထဲအကွက်ချစီစဉ်ပြီးမှ လုပ်တာမျိုးကိုပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်ကြပါတယ်။ နှစ်ချောင်းလုံးကညီနေတဲ့သူတွေကတော့တရားမျှတမှုကိုလိုလားပြီး စိတ်အေးတဲ့သူတွေပါ။ ပေါင်းရသင်းရအရမ်းကောင်းပြီး စိတ်သဘောထားပြည့်ဝတယ်လို့ပြောရင်လည်းမမှားနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေအပေါ်ဆိုနှစ်ဆလောက်ပိုကောင်းတတ်ပြီး နားလည်မှုအပြည့်ရှိတဲ့သူမျိုးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အပြုမူကတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်ပြီးနစ်နာသွားစေတာမျိုးဖြစ်မှာကိုသိပ်ကြောက်ကြပါတယ်။ (လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်) လက္သူႂကြယ္ႏွင့္ … Read more
သင့်ရဲ့ 2021အတွက်ကံဇာကို ဂဏန်းဗေဒင် ဟောစာတမ်းတွက်ကြည့်ရအောင်
သင့်ရဲ့ 2021အတွက်ကံဇာကို ဂဏန်းဗေဒင် ဟောစာတမ်းတွက်ကြည့်ရအောင် ဝါသနာပါရင်တွက်ကြည့်ပါရာနုန်းပြည့်တော့မမှန်ဘူးနော် တနှစ်ချင်းဖြစ်ပျက် တစ်ဦးချင်းအတွက် ဂဏန်းဗေဒင် ဟောစာတမ်း တွက်နည်း မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်မွေးရက် + မွေးလနဲ့သိချ င်တဲ့ နှစ်၊ ကိုအားလုံးပေါင်း၍ တစ်လုံးတည်းသောဂဏန်းကိုယူပါ။သိလိုသူ၏ မွေးရက် + မွေ လ ကို ရောက်ရှီသောသက္ကရာစ်နဲ့တစ်လုံးရအောင်ပေါင်းရတဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ=4-1-2004မွေးဖွားသူအားတွက်လျှင် မွေးရက်=4=4 မွေးလ=1=1 ရောက် ဆဲနွစ်=2021=5 အားလုံး ပေါင်း=4+1+5=10=1+0=1 နောက်ဆုံး တစ်လုံးထဲ ကျန်တဲ့ ဂဏန်း ကို ကြည့်ပါ။ နောက်ဆုံးတစ်လုံးထဲ1ရပါတယ် 1 ဂဏန်းအဟောကို ဖတ်ရုံပါပဲ၊အမျိုးတွေအားလုံးလည်း အဲ့ဒီတွက်နည်းအတိုင်း တွက်ပြီး ရတဲ့ဂဏန်းကိုဖတ်ပါ။ 1 #ဂဏန်းရသောနှစ် အကြံအစည်သစ်တွေ၊လုပ်ငန်းသစ်တွေ၊ အတွေ့ကြုံသစ်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ ဒီနှစ်က့တော့ ငါတစ်စုံတစ်ခုရတော့မှာပဲလို့ စိတ်ထဲမှာ ထားပါ။ အိုးသစ်အိမ်သစ်ဘဝသစ် စရသောနှစ်ဘဲဖြစ်ပါတယ်အကောင်းမဟုတ်သလိုအဆိုးလဲမဟုတ်တော့ပါအတိုက်အခံရန်ရှီနေမည်ဂူတလုံးခြင်္သေ့နှစ်ကောင်အောင်းကိန်းနှစ်ဖြစ်ပါသည်။2… Read more
နေ့စဉ်မကောင်းသောကံများနှင့် အတိုက်အခိုက်၊ဘေးအန္ဒရာယ်များကို လက်တွေ့ကာအကွယ်နည်း
နေ့စဉ်မကောင်းသောကံများနှင့် အတိုက်အခိုက်၊ဘေးအန္ဒရာယ်များကို လက်တွေ့ကာအကွယ်နည်း ၁။ရဟန်းသံဃာများအား ဆွမ်းနှင့်ဆွမ်းဟင်းတို့ကို လောင်းလှူ ပေးခြင်းသည်၊မိမိ၏ ကိုယ်တွင်းရောဂါများကို ကုသမှုပြုရာရောက်ပါသည်။ ၂။ သီလရှင်များအား ဆွမ်းဆန်စိမ်းနှင့်တတ်အားသမျှငွေကြေးများကို လောင်းလှူ ခြင်း သည်မိမိ၏ ကိုယ်ပအပြင်ပဥပါဒ်ဘေးများကိုကာကွယ်မှာပြုရာ ရောက်ပါသည်။ ၃။ အလှူ ခံပုဂ္ဂိုလ်များအာ တတ်အားသမျှပေးလှူ ခြင်းသည်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ရပ်ဆိုးများမှ မိမိကိုယ်ကိုမိမိကာကွယ်မှု ပြုရာရောက်ပါသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ အလှူ အတန်းဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှု အကျိုးကျေးဇူးများကို ယုံကြည်ကြသူများသည် ယခုဘဝနှင့် နောင်ဘဝ၏ ဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်ရာရောက်ပါ သည်။ ဆရာသာထက်ဆန်း ကျိုက်ဝိုင်းဘုရား၊၀၉၇၆၂၉၉၂၃၃၅ ေန႔စဥ္မေကာင္းေသာကံမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခိုက္၊ေဘးအႏၵရာယ္မ်ားကို လက္ေတြ႕ကာအကြယ္နည္း ၁။ရဟန္းသံဃာမ်ားအား ဆြမ္းႏွင့္ဆြမ္းဟင္းတို႔ကို ေလာင္းလႉ ေပးျခင္းသည္၊မိမိ၏ ကိုယ္တြင္းေရာဂါမ်ားကို ကုသမႈျပဳရာေရာက္ပါသည္။ ၂။ သီလရွင္မ်ားအား ဆြမ္းဆန္စိမ္းႏွင့္တတ္အားသမွ်ေငြေၾကးမ်ားကို ေလာင္းလႉ ျခင္း သည္မိမိ၏ ကိုယ္ပအျပင္ပဥပါဒ္ေဘးမ်ားကိုကာကြယ္မွာျပဳရာ ေရာက္ပါသည္။ … Read more
တန်ခူးလအတွက်အကောင်းဆုံးယတြာ တန်ခူးလဆန်း(၁)ရက်နေ့ (12.4.2021) မှ တန်ခူးလကွယ်နေ့(10.5.2021)အထိတစ်လတာလုံး “​ပန်းကန်ပြား တစ်ချပ်တွင် ၁၀၀၀ကျပ် (သို့) ၁၀၀ကျပ်တန် တစ်ရွက်ကို ဖြန့်ခင်းလိုက်ပါ…..။ ထိုပိုက်ဆံပေါ်တွင် ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး တစ်လုံးကိုတင်လိုက်ပါ။ ငှက်ပျောသီး၏ အလယ်တွင် အမွှေးတိုင်(၂)တိုင် စိုက်၍ မိမိအိမ်ဘုရားကျောင်းဆောင်ရှိ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ရိုသေစွာဖြင့် ထွန်းညှိ ပူဇော်ပေးရပါမယ်ခင်ဗျ…..။ နေ့စဥ် မနက်တစ်ကြိမ်၊ညနေတစ်ကြိမ် အမွှေးတိုင်(၂)တိုင်စီ ထွန်းညှိ ပူဇော်ပေးနေရမည်။ ယခုလတစ်လတာတွင် #ကော်ဖီအေး တစ်ခွက်ကို နေ့စဥ် မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ကပ်လှူပေးပါက ထူးခြားမှူများကောင်းကျိုးများစွာကိုလည်း ရရှိခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကံချေကန်တော့ခြင်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့ရန် မမေ့ပါနှင့်။ *နေ့စဥ် အောက်ဖော်ပြပါ ဂုဏ်တော်များကို ရွတ်ဖတ်ပါ။* ဣတိပိသောဘဂဝါ အရဟံ=၁၅ခေါက် ဣတိပိသောဘဂဝါ လောကဝိဒူ=၁၉ခေါက် ဣတိပိသောဘဂဝါ ဗုဒ္ဓေါ=၈ခေါက် တန်ခူးလအတွက်နေ့စဥ်လာဘ်ပွင့်အရပ်မျက်နှာများ ◾️တနင်္ဂနွေနေ့=မြောက်အရပ် ◾️တနင်္လာနေ့=တောင်အရပ် ◾️အင်္ဂါနေ့=အရှေ့အရပ် ◾️ဗုဒ္ဓဟူးနေ့=အနောက်အရပ် … Read more